Comment by boedawgyi October 23, 2006 @ 9:28 am
ကျနော်လဲ ပြဿနာတက်နေတယ်ဗျ။ ဖင်နဲ့ခေါင်းနဲ့ ဆောင့်မသေတတ်လို့…
Comment by Fat punk October 23, 2006 @ 3:01 pm
ဟမ် မောင်လေးက ဘာပြသနာတက်နေလို့တုန်း..ပြောလေ.. အမကူညီရရင်ကူညီပေးမယ်
အကိုဘိုးတော်ကြီးေ၇ အွန်လိုင်းက ကြွားစိန်တစ်စုကိုပြောတာပါ..
Comment by LIN LET KYAL SIN October 23, 2006 @ 3:32 pm
It’savery great post. I’ve received some mails that you sent through gmail. I also dislike these empty-minded burmese military dictators at the bottom of my heart.
Comment by Anonymous October 27, 2006 @ 6:42 am
ဟား ဟား … ဖင်နဲ့ ခေါင်းဆောင့်ပြီး မသေခိုင်းပါနဲ့ညီမရယ်။ သနားပါတယ်။
Comment by Thiha Kyaw Zaw October 28, 2006 @ 4:10 am
Comment by Kyaw Nyein October 30, 2006 @ 7:48 am
Comment by Anonymous November 2, 2006 @ 2:54 pm
hi sis lin let,
moe kyal here.. i hope u can remember me.. i can’t read some of the mm font sis.. why? 😦 anyway i like yr this “ngar mone tat thu myar” ..
Comment by Anonymous November 10, 2006 @ 11:29 am
laughing out loud! =D
Comment by yethuthu January 3, 2007 @ 5:19 am
LOL,,hahahaha,, Gosh,,, I like that,, I like you being straightforwards..that’s what many people can’t do. Keep going, Cheers!
Comment by Anonymous February 28, 2007 @ 4:44 am
WAY TO GO, SIS. 😀
WE LOVE YOU FOR A BAD GIRL TO BAD PEOPLE AND A VERY NICE GIRL FOR OUR COUNTRY!!!!!!!
Comment by Anonymous May 13, 2007 @ 5:29 am
hey, i wanna to be your friend. My opinions are the same as you when i read yours.
Comment by tinmoe May 15, 2008 @ 5:55 am
မလင်းလက်ကြယ်စင်ရယ် စိတ်ရှိလက်ရှိသာ ပြောချလိုက်နော် ရင်ထဲမှာဘာမှချန်မထားနဲ့ သိလား မုန်းဖို့အတွက် အခွန်ဆောင်စ၇ာမှ မလိုတာ ဟုတ်တယ်မလား။ ကျနော်ထင်တာကတော့ ကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ ဆန့်ကျင်နေတဲ့အခါ လူတွေဟာ မုန်းတတ်ကြတယ် နောက်တခုကတော့ အစွဲအလန်းကြီတဲ့သူ၊ ဝါဒစွဲသူတွေဟာ သူတို့ယုံကြည်မှုကို ထိခိုက်တဲ့အခါ မုန်းတတ်ကြတယ်။ မလင်းလက်က ကိုယ်မုန်းတဲ့အရာကို ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ ရေးထားတယ်လို့ ကျနော်သုံးသပ်လိုက်ပါတယ်။ ယုံကြည်မှုရှိတာ ကောင်းပါတယ်.. ယုံကြည်မှုလွန်ကဲရင်တော့ မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာ။ မလင်းလက် ပညာတတ်တစ်ယောက်ပါ ဘယ်အရေးအသားဟာ ကောင်းတယ် မကောင်းဘူး ထောက်ပြဖို့လိုမယ်မထင်ပါဘူး။ ဒီလိုပြောလို့ ကျနော့်ကို သိပ်တော်သိပ်တတ်တဲ့ သူလို့မထင်ပါနဲ့ (အကြံပြုတာပါ)။ လူတိုင်းမှားတတ်ကြပေမယ့် အမှားနည်းတော့ ပိုကောင်းတာပေါ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အမုန်းကတော့ နှစ်ဦးစလုံးအတွက် အကျိုးမရှိတာအမှန်ပဲဗျ။ မချစ်တတ်မုန်းတတ်တဲ့သူဖြစ်အောင် ကြိုးစားပြီး လူတိုင်းအတွက် အကျိုးရှိမယ့်စာတွေ သက်ထက်ဆုံး ရေးသားနိူင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုခဲ့ပါတယ်။
Comment by toe June 12, 2008 @ 1:45 am